Cable pigtail bhokisi, China Cable pigtail bhokisi Vagadziri, Vatengesi, fekitori - Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji co., Ltd
Cable pigtail bhokisi
Iyo fiber optic tambo inopatsanura bhokisi chishandiso wiring kupatsanura chishandiso chemushandisi terminal muFTTH system, uye inogona kuona mabasa akadai sekumwaya, kugovera, uye kuronga kweiyo fiber fiber. zvishandiso zve trunk optical tambo uye yekuparadzira optical tambo mune yekunze, mukoridho kana mukati. Inonyanya kukoshesa iyo fiber yekumisa poindi mu fiber kuwana network. Iyo inosanganisa mashandiro eiyo fusion, chengetedzo uye wiring yeiyo fiber, uye inogona kuona iyo yakatwasuka-kuburikidza uye dhisiki kuchengetedza kweiyo huru tambo.
1.Iyo fiber optic tambo inopatsanurwa bhokisi inoumbwa nemutumbi webhokisi, nhengo yemukati yakarongeka, fiber optic chinobatanidza chinongedzo, Optical splitter uye spare accessories. Iyo ine yakatwasuka-kuburikidza uye yakatsemuka-fiber basa; iyo tambo iri nyore kuwana, nyore kudzokorora, kuwanda mashandiro, nyore kusimbisa. Panofanirwa kuve nenzvimbo yakakwana yekubatanidza mubhokisi remukati rekuparadzira fiber kusangana nekusachengeterwa uye kugoverwa kwetambo panguva yekubatana.
2. Mhando dzakasiyana dzetambo dzinofanirwa kunge dziine maburi epamhepo akazvimiririra, uye iro gomba rinokwanisa kuzadzikisa zvido zvekugadziriswa kwakazara. Iyo fiber fiber inofanirwa kuchengetedzwa zvakanaka muchassis, uye kureba kwakachengetedzwa kuri nyore mukushanda kwechipiri kubatana. Tambo dzinofanirwa kuvharwa kudzivirira mvura uye zvinhu zvine jeki kupinda mukati menzvimbo. Ipa imwe nhamba yemakenduru manejimendi manejimendi kana imwe ligature zvishongedzo kufambisa zvido zvekutanga zvemutsara wekupwanya.
3. Iyo bhokisi rekuparadzanisa fiber rinoshandiswa kune rekunze danda rekumisikidza rinofanirwa kuve rakagadziriswa nekugadzirisa mabhureki nemabhaudhi kuona kugadzikana kwebhokisi. Iyo yekunze kabhodhi inofanirwa kuona iyo yekuvhura dhayamita yeese tambo tambo.